“पायल”को शुभसाइत समपन्नFilmyFanda: Nepal's No. 1 Entertainment news portal site
“पायल”को शुभसाइत समपन्न
फिल्मी फण्डा । फाल्गुनन्द लिङ्देन फिल्म्स्ले निर्माण गर्न लागेको फिल्म “पायल” को शुभसाइत गरिएको छ । उपत्यका लगायत पूर्वको केहि ठाउँमा छायांकन गरिने फिल्मका आगामी शुक्रबारदेखि छायांकन सुरु हुने छ । फिल्म युनिटले राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै शुभसाइत गरिएको थियो । फिल्मका लेखक तथा निर्देशक दिनेश लिङ्देन हुन् । फिल्म समाजमा घटिरहेका विद्यमान आपराधिक घटनाहरूलाई समेटेर थ्रिलर फ्लेभरको बनाइने छ ।
कविता राई लिङ्देनको लगानी रहेको छ । फिल्ममा विकास चौधरीको संगीत , ज्ञानु राईको छायांकन , कुमार श्रेष्ठको द्वन्द्व र दिनेश माङ्मुको नृत्य रहने छ । फिल्ममा रिया श्रेष्ठ, ध्रुव न्यौपाने, राजकुमार लिङ्देन नरेन्द्र सेन्दाङ, राजु घिमिरे, उदय सुब्बा, हस्त लिवाङ, दिलिप ठकुरी, आर पि दाहाल, अर्मान खान , एन्जिस प्रसाईं लगायत कलाकारहरुको अभिनय रहने छ ।
निजी व्यावसाय गर्दै विगत १५ वर्ष देखि अमेरिकामा बस्दै आएका नवनायक नरेन्द्र सेन्दाङ अमेरिकाबाट नेपाल आएका छन् । उनकै पहलमा नेपाल अघि फिल्म “पायल”लाई हङकङ, अमेरिका, सिंगापुर, बेल्जियम प्रदर्शन गरिने छ । फिल्मका प्रस्तुतकर्ता सुमित लिङ्देन र सुदिता लिङ्देन रहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस् : प्रदीपलाई ‘प्रेमगीत ३’ कै भर
फिल्मी फण्डा । नायक प्रदीप खड्कालाई कुनै समय भ्याइ–नभ्याइ थियो । उनी एक पछि अर्को फिल्ममा अनुबन्ध हुने समाचार निरन्तर जस्तै बाहिरियो । चक्लेटी नायकको डिमाण्ड चुलियो । निर्माताहरु उनलाई आफ्नो फिल्ममा अनुबन्ध गर्न इच्छुक थिए । हिरोइन हैन निर्देशक छान्ने प्रदिपको बाध्यता जस्तै भएको थियो । तर, अहिले प्रदीप ब्रेकमा छन् । उनी एउटा फिल्म दिने तर, हिट फिल्म दिने मनशायमा छन् ।
निर्माण समय पछि धकेलिएको फिल्म ‘बेला’ मा उनी अनुबन्ध हुने पक्काजस्तै भएको भनियो । ‘बेला’लाई रामबाबु गुरुङ्गले निर्देशन गर्दैछन् र गुरुङ्गकै निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ मा पनि प्रदीपले अभिनय गर्ने संम्भावना उच्च छ रहेको खबर आयो । उता, सुरेन्द्र पौडेलको निर्देशनमा बन्ने फिल्म ‘शुभ बिबाह’मा पनि प्रदीप काम गर्दैछन् भन्ने खबर आयो ।
सुवास गिरीको कृ २ मा पनि प्रदिप हुने गाईगुई हल्ला थियो । तर सबैमा एकाएक प्रदिप बिलायो । उनी अभिनित फिल्म ‘लभ स्टेशन’ प्रदर्शनको क्रममा थियो । छानेर मात्र फिल्म खेल्ने गरेका प्रदीपले फिल्म ‘लभ स्टेशन’ पछि कुन फिल्ममा अभिनय गर्लान् ? भनियो अन्ततः प्रदीपले ‘प्रेम गीत ३’ नै गर्ने भए । फिल्म ‘कबड्डी कबड्डी कबड्डी’ आफ्नो टिम सहित फ्लोरमा छ । तर, प्रदिप टिममा परेन । अहिले ‘शुभ विवाह’ र ‘बेला’को चर्चा पनि सेलाएको छ ।
‘प्रेमगीत ३’ ले हिरोइन छनोट गर्दैछ । फिल्मले प्रदर्शनको मिति आगामी चैत २८ गते तोकेको छ । उनी अभिनित फिल्महरु ‘रोज’ र ‘लभ स्टेशन’ ब्याक टू ब्याक फ्लप भयो । प्रदीप समय समयमा सफल फिल्म र असफल फिल्मले करिअरमा खासै फरक नपार्ने बताउँछन् ।
फिल्म छान्न नजानेको र बाठो बन्न खोज्दा चिप्लिएको भनेर प्रदिपको आलोचना पनि हुन्छ । स्टारको छवि बनाइसकेका प्रदीपलाई अब सफल फिल्म दिन दवाव छ । त्यसैले होला उनले प्रेम गीतको ब्राण्ड पछ्याएका । करियरको रफ्तारको लागि ‘प्रेम गीत ३’ को भरमा छन् प्रदीप भन्दा फरक नपर्ला ।
यो पनि पढ्नुहोस् : यो बर्ष झण्डै दर्जन फिल्म मात्र
फिल्मी फण्डा । हिमाली वस्तीका वासिन्दाहरु चिसो मौसममा अत्याधिक हिँउ पर्ने हुँदा उच्च भागबाट तल अस्थाई रुपमा बसाई सर्छन् । कष्टकर जीवनशैलीबाट मुक्ति पाउनु उनीहरुको ध्येय हुन्छ । अस्थाई रुपमा बसाई सरेर आफ्नो सुरक्षा खोज्ने हिमाली वासिन्दा जस्तै रजतपटका फिल्म निर्माण युनिटले अस्थाई रुपमा फिल्म निर्माण रोकेका छन् ।
गत वर्ष उनीहरु फिल्मको खस्कदो व्यापारले असुरक्षित भएकाले फिल्म निर्माण नै रोकेका हुन् । निर्माण भए पनि कम मात्रामा निर्माण भएका छन् । चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष आकाश अधिकारी यसलाई स्वभाविक मान्छन् र संसारको जुनसुकै फिल्मी उद्योगमा यस्तो हुने गरेको बताउँछन् । उनले भने,– ‘एकाध वर्षमा फिल्म निर्माण धमाधम हुने र कहिलेकाँही कम बन्ने संसारको जुनसुकै फिल्म क्षेत्रमा हुन्छ ।’ लामा दिन, उच्च हिमाली क्षेत्रको मौसम समेत सफा हुने तथा पानी नपर्ने भएकाले वसन्त र गृष्म ऋतुमा सबैभन्दा बढी फिल्महरु फ्लोरमा जान्छन् । वैशाख र जेठ महिना फिल्म छायाकंनको महिना मानिन्छ । तर, फिल्म छायाकंनको मौसममा यस सिजनमा कम फिल्म फ्लोरमा निस्किएका छन् ।
अघिल्लो वर्ष यही महिनामा करिब तीन दर्जन जति फिल्म फ्लोरमा गएका थिए र ९६ ओटा फिल्महरु प्रदर्शनमा आएका थिए । प्रदर्शनमा आएपनि अधिकांश फिल्महरुले हावा खाएका थिए । गत वर्षको बक्स अफिस कलेक्सनले फिल्म निर्माण युनिटलाई विश्राम लिन बाध्य बनाएको छ । फ्लप फिल्मको बाढी आएकोले फिल्म निर्माण युनिट तर्सिएका छन् । त्यसको परिणाम स्वरुप यसवर्ष कम फिल्महरुले छायाकंन गर्ने तालिका निकालेका छन् । छायाकंनको सिजनमा यस वर्ष पोई पर्यो काले, साङ्लो, छ माया छपक्कै, रातो टिका निधारमा, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, मिस्टर नेपाली लगायत आधा दर्जन फिल्म अहिले फ्लोरमा रहेका छन् ।
यस्तै यो बर्ष भद्रगोलको नयाँ फिल्म, मारुनी, प्रेम गीत ३, आई एम २१, डामाडोल, सम्हालिन्छ कहिले मन लगायतका फिल्महरु पनि रिलिजमा आउने संभावना छ । सबै फिल्मलाई हेर्दा जम्मा एक दर्जनको हाराहारीमा मात्र राम्रा ब्यानरका फिल्महरु यस बर्ष रिलिज हुने देखिएको छ ।
यस वर्षबाट फिल्म निर्माणमा ८० प्रतिशतले कमी आएको बताउँछन् । उसो भए कम फिल्म निर्माण भईरहँदा फिल्म क्षेत्र धराशायी बन्न लागेको हो ? यो कुरा मान्न तयार छैनन उनी । फिल्म बनाउन संख्यामा ध्यान दिनु भन्दा पनि गुणस्तरमा ध्यान दिन सुझाउँछन् अधिकारी । उनले भने,–फिल्म क्षेत्रमा थोरै थोरै लगानी फरक फरक फिल्ममा गर्नु भन्दा पर्याप्त लगानी जुटाएर फरक–फरक भिजनलाई एकत्रित गरि अझ उत्कृष्ट फिल्म बनाउँन सकिन्छ । एकै फिल्म निर्माण गर्नु राम्रो हो । यसले फिल्मलाई गुणस्तरिय बनाउँछ ।’
नेपाली दर्शलाई फिल्म बजारले आकर्षण गर्न नसकेको र धेरै मात्रामा फिल्म प्रदर्शनमा आएकोले फिल्महरु फ्लप हुने गरेको फिल्मकर्मीहरुले मत राख्दै आएका छन् । अझ रिलिज क्यालेण्डर भद्रगोल भइरहँदा क्यारेण्डर नै खालि हुने सम्भावना बढेको छ । सबै फिल्महरु यसै वर्ष छायाकंनमा भएर हलसम्म आउने होइनन् । अर्काइभबाट झिकेर हलसम्म ल्याइन्छ । हलसम्म आउने ल्याकत नपुगेका फिल्महरु पनि छन् जो सिधै यूट्यूब जस्ता सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्ममा आउँछन् । जो आफ्नो फिल्म हलमा लाग्दा फ्लप हुन्छ, प्रचार–प्रसारको लगानी समेत उठाउनेमा विश्वस्त हुँदैनन् उनीहरु भने फ्लप फिल्मबाट सँधै तर्सिएकै राम्रो ।
यो पनि पढ्नुहोस् : हरर फिल्मले दर्शक हसाँयो भने ?
फिल्मी फण्डा । अर्पण थापाले निर्देशन गरेको पहिलो हरर फिल्म थियो ‘सुनकेसरी’ । उक्त फिल्म हरर भन्दा पनि हसाँउने भएको आलोचना भयो । फिल्म हेरेर न दर्शकले हररको महशुस गर्न पाए न समीक्षकको नजरमा नोटिस हुन सक्यो । ‘सुनकेसरी’मा हररसँगै ह्युमर जोडेर निमार्ण गरिएकाले दर्शकले धेरै नरूचाएको थापाको भनाई छ ।
पहिलो हरर फिल्म असफल भए पनि थापाले दोस्रो हरर फिल्म बनाएका छन् ‘घर’ । पहिलो फिल्म सफल नभएपनि नेपाली दर्शकमा हरर फिल्मको क्रेज छ भन्ने बुझेर नै घर बनाएको थापा बताउँछन् । फिल्ममा सुरक्षा पन्त हरर रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । सुरक्षा फरक खालका भूमिका निर्वाह गर्ने कोसिसमा हुन्छिन् । पहिलो फिल्म ‘अझै नि’ सफल नभए पनि उनले ‘धनपति’मा मुख्य भूमिका पाइन् । त्यसपछि ‘भैरे’ र ‘चंगाचेट’ मा उस्तै खालको भूमिकामा देखा परिन् । उनी अभिनित फिल्म ‘सुस्केरा’ हलमा आउन बाँकी छ । सुरक्षाको अर्को फिल्म गोपीले निर्मातालाई सुरक्षित गर्न सकेन ।
फिल्मको ट्रेलर हेर्दा सुरक्षा गर्भवती गृहिणी पात्रका रुपमा प्रस्तुत भएकी छिन् । जुनपात्र भूतको डरबाट ग्रसित छ । काल्पनिक कथावस्तुमा तयार भएको ‘घर’मा घर भित्रकै घटनालाई समावेश गरिएको देखिन्छ । ‘सुनकेसरी’मा ऋचा शर्माले निकै मिहिनेत गरेर हरर रूप धारण गरेको पानीमै मिल्यो ।
डिएस डिजिटलले निर्माण गरेको घरमा सुरक्षा मिहिनेत गरेर हरर रुपमा देखिँदै छिन् । हरर फिल्मले दर्शक हसाँयो भने के होला ? सायद त्यो सुनकेशरी बाट निर्देशक अर्पण थापाले सिकेको हुनुपर्छ । घरबाट केही नयाँ आशा राख्न सकिन्छ । सुरक्षाको हरर रूप दर्शकले कतिको मन पराउलान् ? त्यो भने साउन ३ गते पछि नै थाहा हुनेछ ।
यो पनि पढ्नुहोस् : ‘आयंका’माथि नै भर ?